Warar Goos goos ah. Ruunkinet 6/11/2009
Sarkaal Xisbul Islaam ah oo lagu dhaawacay duleedka Muqdisho
Xaalada Deegaanka Lafoole ee Duleedka Magaalada Muqdisho ayaa degen ka dib markii xalay ay halkaasi ka dheceen iska hor imaadyo dhexmaray xoogag hubeysan iyo ciidamada Xisbul islaam .
Inta la ogyahay 2ruux ayaa u geeriyootay dagaalkaas halka ay ku dhaawacmeyn 2 kale oo mid kamid ah uu aha taliyaha Ciidanka Xisbul islaam ee Deegaankaas .
Ilaa iyo haatan ma jirto warar kale oo intaasi dhaafsisan oo ka soo baxaya deegaanka Lafoole oo ay badi deegaan ku leeyihiin dad horay uga soo barakacay dagaaladii Muqdisho ka dhacay .
Qaar ka tirsan Saraakiisha Xisbul islaam oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in ay ku raad joogaan Shaqsiyaadkii ka dambeeyay weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday hoyga uu ka degenyahay Deegaanka Lafoole taliyaha URurka Xisbul islaam ee Deegaanka Lafoole .
Shir ku saabsan la dagaallanka burcad badeedda oo China ka socda
Maalintii labaad ayaa waxaa ka soconaya wadanka Shiinaha shir caalami ah oo ku saabsan sidii loo dardargalin lahaa hawlaha la dagaalanka burcad badeeda Soomaalida ee qatarta ka dhigay biyaha caalamiga ee kulaala xeebahaSoomaalia.
Shirkan oo ay marti galisay dawlada Shiinaha waxaa ka qayb galaya wakiilo ka kala socda ciidamada badda ee dalalka Ruushka, Jabaan, Midowga Yurub, iyo NATO sida ay u sheegeen wargeyska China Daily masuuliyiin ka tirsan wasaarada gaashaandhiga Shiinaha.
Ka qayb galayaasha shirka ayaa isla jeex jeexi doona sidii si cad la isagu afgaran lahaa masuuliyada gacanka Cadmeed ee ilaalinta ay ka wadaan ciidamada shisheeye iyo sidii si caalami ah la isaga kaashan lahaa hawlagalka la dagaalanka burcad badeeda iyadoo la galbinayo maraakiibta gooshaysa biyaha qatarta badan ee burcad badeedu ka qawlaysanayso.
Ilaa iyo 40 talisyo ciidamo badeed oo ka socda wadamo kala duwan ayaa waxay ka qayb qaadanayaan hawlgalkan oo wali u taag iyo tabar laa weerarada iyo burcad badeeda Soomaalida oo qatar weyn iyo halis ku haya isu socodka gaadiidka badda ee dunida.
Gaari ku rogmaday Shabellaha Dhexe oo dhimasho iyo dhaawac keenay
Gaarigani rogmaday ayaa la sheegay in uu kayimid degmada Xarardheere ee gobolka Galgaduud waxaana uu ku soo jeeday magaalada Muqdisho isagoo siday Cusbo.
Hal qof oo la sheegay in ay tahay haweenay ayaa geeryootay inkabadan 10-kalana waa ay ku dhaawacantay kadib markii gaarigaasi uu rogmaday.
Nuuca gaariga ayaa TM kaas oo siday xamuul cusbo ah, waxana uu ku rogmaday deegaanka Ruunirgood ee gobalka Shabellaha Dhexe.
Dadka degen degmadaasi ayaa ku howlan sidii loo samato bixin lahaa dadkii waxyeelada ka soo gaartay shilkaasi gaari,waxaana loo anaynayaa shilalkan gaari ee ku soo noqnoqday degmadaasi Wadooyinka oo aad u burbursan iyadoona meelaha qaarkood ay Wadooyinkaasi noqdeen meelo ay biyo fariisteen.
Shilalka ayaa aalaba ka dhasha waddooyinka qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya oo xun iyo iyadoo xilliganna ay roobab ka daeen gobalada dalka qaar ee Soomaaliya.